एक्रेलिक कलरकी सर्जिका रीता मानन्धर - TokhaLive
१६ चैत्र २०७७, सोमबार १२:१२
एक्रेलिक कलरकी सर्जिका रीता मानन्धर
• हिक्मत डंगोल
उनी आफ्नो कलामा प्रकृति, संस्कृति, भौतिक जीवन जगत र आधुनिक विज्ञानसंगको तादात्म्यलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरेकी छिन ।ॐ को अन्तर आत्मा देखि ध्यान गर्दे त्यसको भित्री गहराईमा पुगेर त्यहॉको वास्तविकतालाई पहिचान गर्दे आफ्नो कलामा उतार्न उनी निकै सिपालु छिन।
जसरी प्रेम र सुन्दरतालाई शब्दमा बयान गर्न नलकेर लियोनार्दो दा भिन्चीले मोनालिसको तस्वीर बनाएर गए ! उनी पनि आफ्नै प्रयत्नले ध्यान अभ्यास गर्दै श्वास प्रश्वासका विभिन्न आयामको अनुभूति गर्दे उनको हातबाट एउटा सुन्दर आकृतिको सिर्जना भइसक्छ !
उनी अर्थात् रीता मानन्धरले यस्ता आकृतिहरू सिर्जना गरेको २ दशक भन्दा बढी भैसक्यो। रीतालाई ध्यानको गहिराईमा पुगेर विभिन्न रंगसंग खेल्दा निकै आनन्द आउछिन ।प्रकाश र रंगको स्वभाविक संयोजन उनको पेन्टिगमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
एक्रेलिक र पानी रंगको समायोजन गरी कलालाई जीवन्तता दिने कार्यमा साढे २ दशक देखि लागि परेकी रीता मानन्धर अहिले पनि अग्रस्थान ओगटन सफल छिन।उनले तयार पारेकी दृश्य चित्रहरूको प्रदर्शनीमा हेर्न जाने हो भन्ने जो कोही पनि रीताको दक्षताबाट यति प्रभावित हुन्छन कि ती कलाबाट टाढा हुन चाहँदैन।
रीताको कलाकारिता स्कुलबाट नै शुरू भएको हो। एसएलसी सकाएर उनी सिर्जना आर्ट ग्यालरीमा प्रशिक्षण लिन पुगिन । त्यहॉको कृष्ण गुरूले हौसला दिनुभयो। उनी आफ्नो रूचिको विषयमै पढ़ाईलाई अघि बढाउने उद्देश्यले ललितकला क्याम्पसमा भर्ना हुन् पुगिन। त्यहॉ उनी वरिष्ठ कलाकारहरूमा विजय थापा, विपिन घिमिरे,गोविन्द डंगोल, उमा शंकर शाह र राधेश्याम मुल्मी जस्ता दिग्गज गुरूहरूबाट प्रशिक्षित भईन। यसपछि उनी कलालाई तिखार्दे जॉदा उनको दक्षतामा निखारता मात्र आएन । नेपालमा हुने हरेक राष्ट्रव्यापी चित्र,पोस्टर, , कार्टुन तथा लोगो प्रतियोगिताहरूमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सान्त्वना पुरस्कार पनि हात पार्न सफल भईन। केही वर्ष पहिले राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगितामा बनाएको लोगो प्रथम स्थान हासिल गरी नेपाल टुरिजम वोर्डबाट पुरस्कृत भएकी थिइन।
रीताले राष्ट्रीय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रीय कला कार्यशाला तथा प्रदर्शनीहरूमा पनि भाग लिदैं आउनु भएकी छिन । ती मध्ये सन २०१९ मा माल्दिभ्समा SAARC Artists Camp र सन २००४ मा जापानमा भएको Artist in Residence Program मा पनि उल्लेखनीय सहभागिता जनाउनु भएकी थिइन।
नेपालको विभिन्न ग्यालरीमा पनि रीताको कला बिक्न थाले। यसपछि उनी ज्ञानोदय बाल वाटिका स्कुल लगायत अन्य स्थानमा गएर आर्टको प्रशिक्षण दिनथाल्नु भयो। यसबाट रीतालाई आम्दानीको हिसाबले पनि राम्रो हुँदै गईन । उनको कला अमेरिका , जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतमा समेत बिक्री भएर विदेश छरिन थाले।
उनको कलाले यसरी विदेशमा बजार पाउनुको रहस्य के थियो? भन्ने प्रश्नमा रीता भन्छिन- “ मैले संस्कृति , जीवन विज्ञान र जीवन शैली अपनाएर अनुभवलाई चित्र बनाउने गरेकी छु।यस्तै शरीरको सात चक्रलाई पनि लिएर चित्रमा उतारेकी छु। मैले हरेक स्केचमा जीवन्त रूपले उतार्ने गरेर नै मेरो कला प्रख्यात भएको होला। त्यसको साथै मेरो हरेक कलालाई सर्व-साधारणले समेत किन्न सकोस भनेर स्वाभाविक मुल्य दिने गरेकी छु। “ उनले खुलस्त गरिन।
के कला क्षेत्रमा लागेर जीविका आर्जन गर्न सकिन्छ त? भन्ने प्रश्नमा रीता भन्छिन- “ यदि स्तरीय चित्रहरू सिर्जना गर्ने हो भन्ने बॉच्न नसकिने कुरै आउँदैनन । मैले गरेको हरेक सिर्जनाहरू प्रकृतिको अध्ययन गरेर कलालाई नयॉपन दिने गरेकी छु। “
रीताले प्रदर्शनी राखिएका केही ठुला चित्रहरू अवलोकन गर्ने जो कोही पनि मोहित बन्न सक्छन । उनको अर्को समुन्द्र र माछाको पनि श्रृंखला राखेकी छिन। यस बारेमा उनी भन्छिन- “ मैले माछालाई स्वतन्त्रता र सम्मान र मेलको रूपमा अभिव्यक्ति दिएको छु। जसलाई अष्टमंगलमा स्वतंत्रता, सिर्जनशील र शुभलाभको रूपमा लिईन्छ। त्यो दृश्यमा मैले आफ्नो सीप र विचारको पनि रंग संयोजन गर्यौं”।उनी स्पष्ट पार्छिन ।
“ अहिले सम्म म आफ्नो कलाबाट पूर्णतः सन्तुष्टि हुन् सकेकी छैन ।आफ्नो कमि – कमजोरीलाई सुधार गर्दे लगि रहेकी छु। म प्रकृति र मानव विचको सम्बन्ध संयोजन गरी त्यसको रहस्य खोज्दै चित्रित गर्दे क्यानभासमा पोतिरहने छु!”
शैली राना विष्ट, जसको स्केचमा छ मुभमेन्ट!
११ चैत्र २०७७, बुधबार १०:५०
यथार्थवादी चित्रकलामा रमाउने चन्द्रा श्रेष्ठ
१० चैत्र २०७७, मंगलवार १०:२६
आज तामाङ समुदायको सोनाम ल्होसार :-
३० माघ २०७७, शुक्रबार १०:४३
१५औं संस्करणको मिस नेवाः फागुन १५ मा हुने
२९ माघ २०७७, बिहीबार ०९:५५
कलाकार नर बहादुर बि केको एकल कला प्रदर्शनी जारी ( फाेटाे फिचर):-
२६ माघ २०७७, सोमबार २०:४८
बेलायती सेनाका पूर्व प्रमुखबाट मृत्यु अगाडि गोर्खाका नाममा २५ प्रतिशत सम्पत्ति उपहार
२७ पुष २०७७, सोमबार ०९:१३